मौसम पूर्वानुमान : फेरि देशभर वर्षा हुने ! – Namaste Dainik
मौसम पूर्वानुमान : फेरि देशभर वर्षा हुने !
August 15, 2020 August 15, 2020 NamastedainikLeaveaComment on मौसम पूर्वानुमान : फेरि देशभर वर्षा हुने !
काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले तीन दिन देशको अधिकांश भू-भागमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
मनसुनी न्यून चापीय रेखा पश्चिममा नेपाल नजिक दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेकाले तीन दिन देशभर वर्षाको सम्भावना रेहको मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले बताए । “उक्त रेखा नेपालको पश्चिमी भूभाग नजीक रहेकाले पश्चिममा बढी वर्षाको सम्भावना छ”, मौसमविद् प्रधानाङ्गले भने ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २० दशमलव ५ र अधिकतम तापक्रम ३१ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम १६ दशमलव ७ डिग्री र सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम ३६ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
April 18, 2020 Namastedainik
अब मात्रैं चार हजारमा कोरोना परीक्षण गर्न पाइने